डेंगुबाट देशका विभिन्न स्थानमा ३ जनाको मृत्यु
काठमाडौं : तीन महिनादेखि फैलिएको डेंगुको संक्रमणबाट देशका विभिन्न स्थानमा तीनजनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार दुई हप्ताको विचमा सुनसरी, डोटी र चितवनमा एक–एकजनाको मृत्यु भएको हो ।
चितवनको भरतपुर महानगररपालिका–दुईका एकहत्तर वर्षिय पुरुषको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । केही समयता चितवनमा डेंगुको संक्रमण बढदो क्रममा रहेको छ । साउन यता भदौ पहिलो सातासम्म चितवनमा २२५ जनामा डेंगुको संक्रमण भेटिएको छ ।
ती मध्ये चालिस प्रतिशत विरामी भरतपुर महानगरपालिकाका छन । डेंगु नियन्त्रणका लागि लार्भा खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन भैरहेको छ । यो बर्ष पहिलो पटक गत वैशाखमा धरानका एक व्यक्तिमा डेंगुको संक्रमण देखिएको थियो ।
त्यसयता देशभर तीन महिनामा चार हजार तीन सयमा संक्रमण देखिएको छ । अहिलेसम्म डेंगु नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । डेंगुको संक्रमण बयालिस जिल्लामा देखिएको छ ।
प्रदेश ३ मा सरकारले ‘स्कूल बस’ सञ्चालन गर्ने
हेटौंडा : घण्टौँ हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरी प्रदेश नं ३ सरकारले ‘स्कूल बस’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा स्कूल बस सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका १० सामुदायिक विद्यालयका लागि बस उपलब्ध गराउने र आवश्यकतानुसार क्रमशः त्यसको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै जाने उनको भनाइ छ ।
हाललाई प्राथमिकताका आधारमा दश विद्यालयलाई एक-एक बस उपलब्ध गराउन लागिएको छ । विद्यार्थी कम र शिक्षक बढी भएका विद्यालय समायोजन गर्दा केही विद्यार्थीलाई टाढाबाट विद्यालय आउनुपर्ने बाध्यता भएका कारण त्यस्ता विद्यालयलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।
डोटी : चार जना सरकारी चिकित्सकको दरबन्दी रहेको डोटी अस्पतालमा पछिल्लो समय गैरसरकारी संस्थाले खटाएका चिकित्सकका भरमा काम सञ्चालन हुँदै आएको छ । अस्पतालमा नवौं र दशौँ तहका दुई जना र मेडिकल अधिकृत दुई जना गरी कूल चार जनाको दरबन्दी भए पनि एक जना मेडिकल अधिकृत डा भूषण मिश्र मात्रै कार्यरत रहेका छन् । उनले निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट भएर अस्पताल चलाइरहेका छन् ।
काठमाडौँ : काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु) को स्कूल अफ एजुकेसनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम (टीइभीटी) लक्षित स्नातकोत्तर तह कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रम दक्षिण एशियामै पहिलो पटक काठमाडौँ विश्वविद्यालयले शुरु गरेको हो ।
देशमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमको विकास गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा एक प्राविधिक शिक्षालयको विकास गर्ने लक्ष्य रहेको सरकारले घोषणा गरेको थियो । देशका ७० प्रतिशत युवाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम प्राप्त गर्न सके समाज रूपान्तरणका लागि सघाउ पुग्ने सकारको विश्वास छ ।
सरकारले नेपालका सबै ७५३ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयहरू खोल्ने योजना राखेको छ । देशभर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) का झण्डै ६०० आङ्गीक तथा सम्बन्धनप्राप्त शैक्षिक संस्थाहरु छन् । सोही सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै केयूले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमको नेतृत्व र अनुसन्धान विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न यो कार्यक्रम शुरु गरेको हो ।
“‘सरकारले एक गाउँ एक प्राविधिक शिक्षालय’ को अवधारणा ल्याउनासाथ यो कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका हौँ”, स्कूल अफ एजुकेसनका डिन तथा प्राध्यापक डा महेशनाथ पराजुलीले भने, “तर यो कार्यक्रमको पूर्व तयारी अगाडिबाटै भएको थियो ।” उनका अनुसार सरकारले प्राथमिकताका साथ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमलाई अघि बढाएपछि विश्वविद्यालयले पनि आफ्नो दायित्वका रूपमा यो कार्यक्रम शुरु गरेको हो ।
नेपालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका लागि आवश्यक नेतृत्वदायी क्षमता भएका जनशक्ति तयार गर्न केयूको यो कार्यक्रम कोसेढुङ्गा सावित हुने प्राध्यापक डाक्टर टंकनाथ शर्माले बताए । उनले भने, “नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम भएकाले यो विषय अध्ययन गर्नेहरुले छिट्टै रोजगारीको अवसर पाउने अवस्था रहेको छ ।”
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमका विज्ञ डाक्टर उषा भण्डारीका अनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीममा स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रमले यस क्षेत्रका लागि आवश्यक योजनाकार, व्यवस्थापक तथा अन्य विशेषज्ञ तयार गर्दछ । उनले भनिन्, “पढ्ने मात्र नभई गरिखान सिकाउने शिक्षाको विषयलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै शैक्षिक कार्यक्रम आवश्यक थियो जुन केयूले ल्याएको छ ।”
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र राजयोगा फाउन्डेशनबीच समझदारी
काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा भारतको माउण्ट आबू स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विद्यालयको राजयोगा एजुकेशन एण्ड रिसर्च फाउन्डेशन (Rajyoga Education an Research Foundation 'RE&RF') बीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मूल्य शिक्षाको पठनपाठन गराउने विषयक समझदारी भएको छ ।
त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ राज खनिया र ब्रह्माकुमारी संस्थाको तर्फबट फाउन्डेशन शिक्षा प्रभागका अध्यक्ष राजयोगी डा. मृत्युन्जयले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
योसँगै नेपालकै पाको तथा विश्वकै सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्ने र विश्व भरीका एक हजार विश्वविद्यालय मध्येमा चुनिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्यस अन्तर्गतका संकायहरुमा मूल्य शिक्षाको पठन पाठन गर्ने ढोका खुलेको छ ।
अमेरिका : नेपालकी सन्तोषी बस्नेतले अमेरिकाको विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने हार्वर्ड हिरो २०१९ को उपाधि हात पारेकी छन् । विश्वविद्यालयले हरेक बर्ष प्रदान गर्ने हार्वर्ड हिरो प्राप्त गर्ने सन्तोषी पहिलो नेपाली हुन् ।
हार्वर्ड ग्राजुएट स्कूल अफ एजुकेशनमा कार्यरत उनीसँगै १८ हजार कर्मचारीमध्ये ६१ जनाले यस्तो अवार्ड पाएका हुन् । सन्तोषी वित्त विभागमा लेखा सहायकका रुपमा कार्यरत छिन् । उनको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन लाई आधार मानेर सन्तोषीलाई उपाधि दिइएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
विश्वविद्यालयको स्यन्देर्स थियटर हलमा विश्वविद्यालयका प्रेसिडेन्ट लरेन्स एस बकवो ले सबै हार्वर्ड हिरोहरुलाई संम्मान तथा धन्यबाद दिदै रात्री भोजको आयोजना गरेका थिए ।
काठमाडौं बत्तीसपुतली निवासी बुवा जनक मान सिंह बस्नेत र आम भगवती बस्नेतकी पहिलो सन्तान उनी सन् २००६ देखि अमेरिकाको बोस्टन सहरलाई कर्मथलो बनाउँदै आएकी छन् ।
सन् २०१३ मा 'जोन्सन एंड वेल्स विश्वविद्यालय' रोडआइलैंड बाट बिजनेस स्टडीजमा स्नातकोत्तर गरी हार्वर्ड छिरेकी सन्तोषी शिक्षालाई नै आफ्नो सबैभन्दा ठूलो धन मान्दछिन् ।
हार्वर्ड पढ्ने सपना पूरा नभएपनि त्यहाँ काम गर्न पाउँदा र उत्कृष्ट कर्मचारी ठहरिंदा असीमित खुशी मिलेको उनले सुनाइन् । 'सबैको सपनाको विश्वविद्यालय रहेको हार्वर्डले प्रदान गरेको उपाधि पाउनु मेरो लागि मात्र नभएर सबै नेपालीका लागि खुशीको कुरा हो'– उनले भनिन् ।
पढ्नका लागि र अमेरिकामा टिक्नका लागि आफूले गरेको संघर्ष र मिहेनतको फल मिलेको सन्तोषीले सुनाइन् । उनले भनिन्– 'बाहिरबाट हेर्दा र सुन्दा अमेरिकाबारे जुन धारणा बन्छ, त्यो यहाँ आइसकेपछि फरक हुन्छ । यस्तोमा कडा मिहेनत र संघर्ष गर्न नसक्ने व्यक्ति टिक्न सक्दैन । म आफूलाई त्यस अर्थमा भाग्यमानी ठान्दछु ।'
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, पूर्वअमेरिकी रास्ट्रपति बराक ओबामा, जर्ज बुश देखि राजा बिरेन्द्र लगायत संसारका ख्याति प्राप्त व्याक्तिहरुले पठन पाठन गरेको विश्वविद्यालय हार्वर्ड हो ।
स्कटल्याण्ड : एनआरएनए स्कटल्याण्डले कालिकोटको रास्कोटमा बन्न लागेको रास्कोट सामुदायिक अस्पताललाई सहयोग प्रदान गरेको छ ।
एनआरएनए स्कटल्याण्डका अध्यक्ष मोहन कार्कीले गत मार्च महिनामा एनआरएनए स्कटल्याण्डले आयोजना गरेको हिल वाक कार्यक्रमबाट संकलित पचास हजार रुपैयाँ रबि लामिछाने फाउन्डेसन मार्फत रास्कोट अस्पताल प्रदान गरिएको बताए ।
सहयोग रकम संकलन अभियानमा कृष्ण दाहाल, राम बगाले, उज्वल कार्की, दिवाकर पाण्डे, बलराम पौडेल, माधव भण्डारी, राम श्रेष्ठ लगायतको सक्रियता रहेको थियो ।
रास्कोट सामुदायिक अस्पताललाई नमुना सामुदायिक स्मार्ट अस्पताल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ भने अस्पतालबाट कालिकोटका पचास हजार बासिन्दा लाभान्वित हुने जनाइएको छ । अध्यक्ष मोहन कार्कीले आगामी दिनहरुमा एनआरएनए स्कटल्याण्डले यस्तै प्रकारका अन्य सहयोगहरु पनि गर्ने बताए ।
नेपालगञ्ज : सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेको नेपालगञ्जको भेरी अस्पताल परिसरमा अत्याधुनिक ‘इनडोर ब्लक’ (बिरामी भर्ना कक्ष) को निर्माण कार्य शुरु गरिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगञ्जले सो ब्लकको भवन निर्माण शुरु गरिएको हो ।
अस्पतालका प्रमुख डा रुपानन्द अधिकारीका अनुसार तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने समयसीमा तोकिएको भवन निर्माणका लागि झण्डै रु ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यसैबीच नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२३ मा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सहयोगमा रु ६५ लाख ९८ हजारको लागतमा भवन निर्माण भएको हो । उक्त स्वास्थ्य केन्द्रबाट खोप, परिवार नियोजन, सामान्य उपचार, परामर्श लगायतका सेवा शुरु गरिएको नगर प्रमुख डा धवलशम्शेर राणाले बताए ।